नेपाल खस्किएको कि अरु बलिया बन्दै गएका ?
११ कात्तिक २०७७, मंगलबार
# मुम्बई ईण्डियन्स
# साउथ अफ्रिका
ई-खेलकुद २०७६ फागुन १७ , शनिबार ०७:०२ मा प्रकाशित
काठमाण्डौ । १० बर्ष अघि डिभिजन फाईभमा रहेको नेपालले पछिल्लो दशक अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटमा ऐतिहासिक छलाङ मार्दै टि–२० विश्वकपसम्मको यात्रा तय गरेको थियो । बंगलादेशमा भएको विश्वकपमा सुरुवाती दुई खेलमा हङकङ र अफगानिस्तानलाई सहजै हराएको नेपालले तेस्रो खेलमा आयोजक बंगलादेशसंग प्रतिस्पर्धात्मक खेल खेलेको थियो । डिभिजन फाईफ, फोर, थ्रीको विजेता बन्दै आईसीसी वल्र्ड क्रिकेट लिग च्याम्पियनसीपमा प्रबेश गरेको नेपाल त्यसलगत्तै खस्कन थालेको हो ।
८ राष्ट्र सहभागी प्रतियोगीतामा खेलेका १४ मध्ये मात्र ४ मा जित निकालेको नेपाल तालिकाको सातौ स्थानमै अड्कियो । त्यसपछि पनि नेपालले धेरै अवसर पाएको थियो । टि–२० विश्वकपको ग्लोबल छनोटका लागि भएको रिजनल छनोटमा कतार र सिंगापुरसंग अप्रत्यासी हार भोग्दै नेपाल सब रिजनल छनोटमै सिमित बन्यो । सन् २०१८ को एसीयाकप क्वालिफायरमा सहभागी ६ राष्ट्रमध्ये चौथो स्थानमा रहेको नेपालले त्यो अवसर पनि बिचमै गुमाएको थियो । ओमान, युएई र हङकङसंग पराजित भएको नेपालले खेलेका ५ मध्ये सिंगापुर र मलेसीयालाई मात्र हराएको थियो ।
नेपाल अहिले सन् २०२३ को एकदिवसीय विश्वकपको छनोटका रुपमा रहेको लिग टु को सिरिज पनि खेलिरहेको छ । घरेलु मैदानमा सिरिजको पहिलो ४ खेल खेलेको नेपालले २ मा जित र २ हार भोगेको छ । ओमानसंग दुबै खेल खेलेको नेपालले अमेरिकासंगका दुबै खेलमा जित हात पारेको थियो ।
पछिल्ला नतिजा मुल्याङकन गर्दा नेपाललाई हराउने टोलीको सुचीमा ओमान, कतार, सिंगापुर, कुवेत र मलेसीया पनि आउन थालेका छन् । विश्व क्रिकेटमा अहिले तहल्का मच्चाईरहेका अफगानिस्तान, आयरल्याण्ड, स्कटल्याण्ड, नेदरल्याण्ड जस्ता टोलीलाई सहजै हराउने सामथ्र्य राख्ने नेपाल किन योबिचमा यति कमजोर बन्यो ? प्रश्न गम्भीर रुपमा खडा भएको छ ।
नेपाललाई क्रिकेटको माथिल्लो स्तरसम्म पुर्याउन सफल भएका पारस खड्का, ज्ञानेन्द्र मल्ल, शरद भेषावकर, बसन्त रेग्मी, सोमपाल कामी, करण केसी, बिनोद भण्डारी लगायतका खेलाडी अहिलेपनि टोलीका महत्वपुर्ण सदस्यकै रुपमा रहेका छन् । तर लगातार खस्कदा क्रममा रहेका उनीहरुबाट सम्भावना अझै जिवितै रहने अवस्था न्युन देखिदै गएको छ । अब ठुला नामले मात्र नेपाली क्रिकेटले प्रगती गर्न सक्दैन भन्ने संकेत यो ३ बर्षको अनुभवले देखाईसकेको छ । पुर्ब कप्तान पारस खड्काले २ बर्ष अघि नै नेपाली टोलीमा पोष्टमार्टमको समय आईसकेको बताएका थिए । उनको आशय पनि नयाँ र क्षमतावान खेलाडी टोलीमा आउनुको विकल्प छैन भन्ने नै हो । तर घरेलु क्रिकेटको अभिभावकिय निकाय आईसीसीको निलम्बनमा परेको समय थला परेका घरेलु क्रिकेट गतिबिधि शुन्य बन्दाको परिणाम अहिले नेपालले भोगीरहेको छ । टि–२० वरियतामा एसोसिएट राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा माथिल्लो अवस्था अर्थात विश्व वरियताको १२ औ स्थानमा रहेको नेपाल अब विस्तारै त्यो स्थान गुमाउने चरणमा छ ।
एकदिवसीय वरियतामा पनि १६ औ स्थानमा रहेको नेपाल अघि बढ्न होईन यथास्थानमा रहन पनि नसक्ने अवस्थामा पुगीसकेको छ ।
यो अवस्था क्षमतावान नयाँ खेलाडी टोलीमा नआउदासम्म कायम रहनेमा दुई मत छैन् । त्यसका लागि भर्खरै निलम्बन फुकुवा भएर आएको नेपाल क्रिकेट संघले अहिलेबाटै तयारी थाल्न जरुरी छ ।
नेपालको अवस्थाको ठिक विपरित ओमान, सिंगापुर कुवेत, मलेसीया कतार लगायतका मुलुकले क्रिकेटमा ठुलो लगानी मात्र होईन खेलाडी चयनमा पनि त्यस्तै ध्यान पुर्याईरहेका छन् । जसको प्रत्यक्ष असर उनीहरुले हात पारेको नतिजाहरुले पनि स्पष्ट पार्दै आएको छ । अनुभवी टोलीमाथी सहज जित निकाल्न मात्र होईन क्रिकेटका अन्य पक्षका पाठ पनि उनीहरुले सिकाउन थालेका छन् । अझ आप्रबासी खेलाडीलाई राष्ट्रिय टोलीको जर्सीमा राख्न सक्ने सामथ्र्यका कारण पनि उनीहरु दिनप्रतिदिन प्रगतीको पथमा लम्किरहेका छन् ।
फिफा अध्यक्ष ईन्फान्टिनोलाई कोरोना सक्रमण
जिम्बावेका २ खेलाडी र २ स्टाफमा कोरोना सक्रमण
एन्फा अध्यक्ष शेर्पालाई पनि कोरोना सक्रमण
नेपाल र बंगलादेशबिचको मैत्रीपुर्ण खेलको मिती तय
च्याम्पियन्स लिग आज सुरु हुदै,आज बार्सा युभेन्टस र पिएसजीको खेल
नव नियुक्त राखेप बोर्ड सदस्यले लिए सपथ
गुगल सर्चमा मेस्सीले कोरोनालाई पछि पारे
विश्वकप फुटबलको खेल तालिका सार्बजनिक, नेपाली दर्शकलाई सहज समय
कप्तानका रुपमा ज्ञानेन्द्रको सुखद सुरुवात, एमसीसी ५ विकेटले पराजित
क्रिकेट मैदानबाट पारस खड्काको अघोषित सन्यास !
साग खेलकुदमा ऐतिहासिक स्वर्ण पदक हात पार्ने नेपाली खेलाडी(सुचीसहित)
पारसको निर्णय हतारोमा भएको सरोकारवालाको टिप्पणी